I-Industrial Ceramic Plate, i-Alumina Industrial Industrial Ceramic Plate, I-Platinum Ye-Industrial Ceramic Plate Yokugqoka I-Wear-Resistant, I-Square Refining Industrial Ceramic Plate Umthengisi e-China
Home > Imikhiqizo > I-Advanced Ceramic PlateI-Industrial Ceramic Plate
Izigaba zomkhiqizo we- I-Industrial Ceramic Plate , singabakhiqizi abakhethekile abavela eChina, I-Industrial Ceramic Plate , I-Alumina Industrial Industrial Ceramic Plate abahlinzeki / ifakethe, imikhiqizo yekhwalithi ephezulu ye- I-Platinum-Steel Resistant Plam Ceramic Plate R & D kanye nokukhiqizwa, sinemisebenzi ephelele emva kokuthengisa nokusekela lobuchwepheshe. Bheka phambili ukubambisana kwakho!
Ukushisa okuphezulu kuka-96% e-alumina ipulangwe
I-flat alumina ceramic liner enziwe kahle ngokwezifiso
I-alumina ipulangwe yelumini ye-ceramic yokuqondisa izinwele
Isakhiwo esikhethekile se-ceramic plate insulator
Ishidi elingu-95% le-alumina cereamic
Ukuhlanzeka okuphezulu kwe-alumina ipayipi yelinamisi
Ikhwalithi ephakeme yezimboni ze-ceramic plate
Amapulangwe angu-96% e-alumina e-ceramic Incazelo: I-aluminium oxide amakhebhu e-ceramic yi-appliaction ethandwa kakhulu emkhakheni wezinhlobo ezahlukene, njengamandla amalahle, insimbi nesensimbi, ukumamatheka, imishini, amalahle, amami, amakhemikhali, amakhemikhali, i-port kanye ne-wharf.ceramic substrate, enezinga...
I-Alumina ceramic lining tile I-aluminium oxide substrate yi-substrate ethandwa kakhulu, i-substrate ethandwayo kakhulu, enezingqikithi eziphezulu zokushisa, amandla aphezulu angokwemvelo, ukumelana nokukhishwa kwe-abrasion kanye nokulahlekelwa okuncane kwamathambo. Ubuso be-alumina substrate i-porumity elula futhi...
I-flat alumina ceramic liner enziwe kahle ngokwezifiso Siye sahlinzeka nge-platearic ceramic plate plate ehlukahlukene eyenziwe ngu-95% kuya ku-99.7% i-alumina, i-denesity kusuka ku-3.6g / cm3 kuya ku-3.90g / cm3 ngokuklama okuhlukile, usayizi ohlukile, izidingo ezahlukene zokubekezela. Sinendlela yokwenza ukukhetha,...
U-Alumina ukushisa kwe-ceramic Incazelo: Ukushisa okushisa nge-Ceramic ingxenye ye-ceramic yokushisa ukushisa emishini kagesi. Izinzuzo eziyinhloko zokushisa okushisa nge-ceramic: 1. Umthamo wokushisa we-ceramic mncane ngokushisa okushisayo okuqondile. 2. Isici esikhulu kakhulu sokushisa okushisa nge-ceramic sakhiwe...
Ukushisa khipha umshini we-ceramic insulator Incazelo: Ukushisa kuka-Alumina kudibanisa i- ceramic insulators zisetshenziselwa kakhulu emasimini kagesi nezigesi ezidinga ukushisa ukushisa, ukushisa ukushisa, ukumisa ukushisa, ukumelana nokushisa okukhulu nokushisa okukhulu kwamandla. I-coefficient yokuqhuba ukushisa...
I-shim ye-ceramic ephakeme iyenziwe ngamaphesenti angu-95, 99% noma angu-99.5% e-aluminium oxide e-ceramics, ingafakwa ngokucindezela okushisa okuzenzakalelayo noma ukukhishwa kwe-tape ngomzimba omncane we-ceramic. Siyakwazi ukwakha ubukhali be-shim ngekhamera njengomdwebo wamakhasimende ngamunye kanye nokwaziswa,...
Amapulangwe e-Ceramic okuqondisa izinwele Incazelo: Ibhodi le-Alumina ye-ceramic yokuqondisa izinwele lenziwe ngama-alumina angama-95%, ingafakwa, noma ifakwe ngokucindezela okushisa ngokuzenzakalelayo nomzimba obunzima we-ceramic. Siyakwazi ukwakha ibhodi ye-ceramic ye-hairener ' yezinwele ' njengeklayenti...
I-Ceramc plate insulators Incazelo: I-Alumina ceramc plate insulators ine-application extension kakhulu ekuhambeni kwemboni, ngezinye izikhathi, isakhiwo esikhethekile seperiki ye-ceramic siyadingeka ukuze kusetshenziswe ukusetshenziswa okukhethekile. Siyakwazi ukwakha umthamo wekhasi le-ceramic elenziwe ngokwezifiso...
Le plate plate ye-ceramic yenziwe nge-99.5% i-alumina eyakhiwa ngokucindezela okumile ngokuthungwa okukhulu kakhulu. Ukuze uhlangabezane nesicelo esicindezelekile samakhasimende, kudingeka ukugaya okucacile ukuze kufinyelele ku-flat1 kube ngu-0.001 futhi ukubekezelelana kokuqina kube ngu-0.01mm. Sinikeza izinhlobo...
Lokhu kufakwa kwe-ceramic kwenziwa nge-95% alumina eyakhiwa ngokucindezela okumile. Ngezinye izikhathi yayisetshenziswa kumadivayisi we-fiber optical njengendlela yokuvula optical. Ukuze uhlangabezane nesicelo esicindezelekile samakhasimende, kudingeka ukugaya okucacile ukuze kufinyelele ku-flat1 kube ngu-0.001 futhi...
Le diski ye-ceramic esezingeni eliphezulu iyenziwe ngamaphesenti angu-99.5% alumina okwakhiwa ngokucindezela okumile ngokuthungwa okukhulu kakhulu. Ukuze uhlangabezane nesicelo esicindezelekile samakhasimende, kudingeka ukugaya okucacile ukuze kufinyelele ku-flat1 kube ngu-0.001 futhi ukubekezelelana kokuqina kube...
Sinikeza izinhlobo eziningi ze-alumina, i-zirconia kanye ne-nitride aluminium ceramic plate nge-pressing kanye ne-tape casting kusuka kumaminithi. ubukhulu obukhulu obukhulu nobukhulu obuhlukahlukene kusuka ku-1.0mm kuya ku-10mm. Kanti futhi ubujamo obunzima, ukwelashwa okuphezulu okucacile nokwelashwa okudingekayo...
Ukuhlanzeka okuphezulu kwe-alumina ipayipi yelinamisi Kanti futhi ubujamo obunzima, ukwelashwa okuphezulu okucacile nokwelashwa okudingekayo kufinyeleleke ngokugaya kahle, ukuphosa, ukusika, ukusika, ukuchithwa kwe-CNC njalonjalo. Sinikeza izinhlobo eziningi ze-alumina, i-zirconia kanye ne-nitride aluminium ceramic...
Ikhwalithi ephakeme yezimboni ze-ceramic plate Sinikeza izinhlobo eziningi ze-alumina, i-zirconia kanye ne-nitride aluminium ceramic plate nge-pressing kanye ne-tape casting kusuka kumaminithi. ubukhulu obukhulu obukhulu nobukhulu obuhlukahlukene kusuka ku-1.0mm kuya ku-10mm. Kanti futhi ubujamo obunzima, ukwelashwa...
I-China I-Industrial Ceramic Plate Abahlinzeki
Sinikeza izinhlobo eziningi ze-alumina, i-zirconia kanye ne-nitride aluminium ceramic plate nge-pressing kanye ne-tape casting kusuka kumaminithi.
Usayizi ubukhulu obukhulu ngobukhulu obuhlukahlukene kusuka ku-1.0mm kuya ku-10mm.
Kanti futhi ukuma kwesimo esiyinkimbinkimbi kanye nesidingo esiphezulu sezinto ezidingekayo phezu komhlaba kungatholakala ngezinqubo eziyisibili.
I-Alumina Industrial Industrial Ceramic Plate
I-Platinum-Steel Resistant Plam Ceramic Plate
Ukuhlanza Isikwele Sezimboni Ze-Ceramic Plate